Dördüncü Şerit Konak Tramvayı | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirစတုတ္ထချွတ်အိမ်ရှင် Tramway
22 / 09 / 2015 35 Izmir, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
စတုတ္ထလိန်းအိမ်ကြီး Streetcar: Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အလမ်းရထားပရောဂျက်အသစ်တခုတည်းဖြတ်မူနှင့်အတူအိမ်ကြီး, Mustafa Kemal ကမ်းရိုးတန်းလိုင်း Boulevard, သုံးလမ်းသွားလမ်းတည်ဆဲ Navigator ၏စတုတ္ထလမ်းသွားအတွက်မြေယာနှင့်ပင်လယ်ဘက်ကိုတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင်မည်ပြီးနောက်တည်းဖြတ်မူပြီးနောက်နေ့လူသိရှင်ကြားလိမ့်မည်။
အိမ်ရှင်နှင့် Karşıyaka လမ်းရထားစီမံကိန်းအားတည်းဖြတ်မူမီနှင့်အပြီးတင်ဒါနှင့်အတူမြို့အစီအစဉ်အပေါ်အမှတ်အသားကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးရဲ့ start Karşıyaka အဆိုပါလမ်းရထား Karşıyakaအဓိကအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အို palmily အပါအဝင်ကမ်းခြေပေါ်မှာလူတွေ, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းမှသစ်ပင်များကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်, မှတ်တိုင်များနှင့် Alaybey ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းများ၏တုံ့ပြန်မှု၏ရလဒ်များကို Karşıyaka İskele’de hattın son bulmasıyla tamamlanan revizyonla uzunluğu 9.7 kilometreden 8.3 kilometreye, istasyon sayısı ise 15’den 14’e düştü.
အဆိုပါ boulevard တွင်သွားနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုလမျးခရီး Mustafa Kemal ကမ်းခြေလိုင်းများ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သစ်ပင်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနူးညံ့၏ဖယ်ရှားရေးမှဦးဆောင်သည့်ပိုးစာပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းက Boulevard လမ်းMithatpaşaပဏာမပြောင်းလဲနှင့်အတူဆက်လက်အစိမ်းရောင်လယ်ကွင်းဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ် Sair Esref လေလံမတိုင်မီ Streetcar ခုနှစ်တွင်အိမ်ကြီး ။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ထပ်မံအသွားအလာစီးဆင်းမှုအပေါ်မသန်မစွမ်းယာဉ်ရပ်နားMithatpaşaလမ်းဖန်တီးခြင်းနှင့်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အဦများပြဿနာများပင်လယ်ကမ်းခြေ Boulevard လိုင်းခေါ်ဆောင်သွားနှငျ့ ပတျသကျ. ။ သို့သော်အစားအစိမ်းရောင်လိုင်း၏ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းကတွင်ထည့်သွင်းအသစ်တစ်ခုလိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
စတုတ္ထလမ်းသွားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့လမ်းရထားသံလမ်းမှမကြာမီကတည်းဖြတ်မူများကို Mustafa Kemal Coastal Boulevard ဖန်တီးလိမ့်မည်။ In-တကမ်းခြေ Boulevard လမ်းဘေးတလျှောက်တွင်မယ်လိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းက, ပင်လယ်တည်ရှိရာဒေသဖို့လမ်းဘေး၏အခြားဘက်ခြမ်း။ လိုင်းပျမ်းမျှနှင့်လမ်းဘေးစင်္ကြံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ထုတ်ယူပါလိမ့်မည်ပြိုကျဖို့သုံးလမ်းသွားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတွင် fit ရန်။ ပွဲခံရာတည်းဖြတ်မူနှင့်နောက်ဆုံးအဆင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စီမံကိန်းကန်ထရိုက်တာဖြစ်လိမ့်မည်ညျကြိ။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu အများပြည်သူ၏တည်းဖြတ်မူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ Kocaoglu, အလမ်းရထားနိုင်အောင်အများကြီးအကြောင်းရင်းများတစျဦး၏တည်းဖြတ်မူကုမ္ပဏီကသူက Izmir ထိုသို့သောစီမံကိန်းများမရှိခြင်းထင်ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအချို့သောအခက်အခဲများ Kocaoglu ကြောင်းကိုသိမြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုဇာတ်စင်မှကြွလာသောအခါ Izmir ပြင်ပကုမ္ပဏီများကထွက်သယ်ဆောင်အဆိုပါစီမံကိန်းများ, သူထို့ကြောင့်အပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ကဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောငရုတ်ကောင်းအဖြစ်သစ်ပင်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်လိုင်းပေါ် Kocaoglu ယူကလစ်, စသူတို့သည်သင့်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စျေးဝယ်စင်တာဖွင့်နဲ့တူစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိကဆိုသည်။
တစ်ဖန်ဆနျးစစျကွောငျးကိုဓါတ်ရထားစီမံကိန်းများ, သူတို့ကလမ်းပေါ်မှာMithatpaşaမြို့တော်ဝန် Kocaoglu မှယူရည်ရွယ်တစ်ခုအလယ်အလတ်အိမ်ရှင်လမ်းရထားစီမံကိန်း "မိတ်ဆွေစီမံကိန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြောနေကြပါတယ်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ဒေါင်လိုက်အကူးအပြောင်းနှင့်အတူ Hatay ကမ်းရိုးတန်းတစ်အလုပ်များလမ်းအတွက်Mithatpaşaမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သလမ်းပေါ်လမ်းရထား run နိုင်ပါတယ်မြင်တော်မူ၏။ ကျနော်တို့ Coastal Boulevard ၏သစ်တစ်ခုလိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းအကြောင်းအစိမ်းရောင်နယ်ပယ်များ၏ sensitivity ကို၏။ အကြောင်းမူကား, မြေအောက်ဟာဂရန်းတူးမြောင်းကိုထိစရာမလိုဘဲစုဆောင်း၏ပင်လယ်ကမ်းခြေ Boulevard အတွက်လက်ရှိသုံးလမ်းသွားလမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ, အလမ်းရထားလိုင်းကိုစတုတ္ထလမ်းသွားဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပျမ်းမျှအတွက်အဖြစ်ကျနော်တို့ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်မကစားကြဘူး။ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာနှင့်ထွက်ခွာလက်ျာလမ်းရထားလိုင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးစီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံ့လဝီရိယ။ ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ဧရိယာ၌မကျင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်အဘို့ဆောင်သောပွဲပြီးနောက်ကျနော်တို့အများပြည်သူပြောပြလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ရထားဆောက်လုပ်ရေးအတူတကွဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ အိမ်ကြီး 13 ရှည်လျားကီလိုမီတာနှင့်အလမ်းရထားရှိရေးလိမ့်မယ် 19 ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ Üçkuyular-ကမ်းခြေ Mustafa Kemal Boulevard, Fethi Bey Caddesi အိမ်ရှင်-အာဇာနည်ဗိမာန်, အာဇာနည်ဗိမာန်ရင်ပြင် -Frame အိပ်ရာအသုံးအဆောင် Avenue Halkapınarသည်ရိပ်သာလမ်း Montreux Ashraf Boulevard နှင့် Alsancak ရောဂါ-အာဇာနည်နေ့အကြားကို run ပါလိမ့်မယ်။
ဆက်စပ်သောÜçkuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) ရထားလမ်း
Uckuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Mansion) နှင့် Karşıyaka လမ်းရထားလိုင်းအတွက် ...
mirzmir ရထားလမ်းစီမံကိန်းÜçkuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) နှင့်…
İzmir Metropolitan Municipality Tram Lines Project Üçkuyular - Konak - Alsancak …
အိမ်ရှင်နှင့် Karşıyaka ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်း Konak ၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ
Mustafa Kemal Boulevard ကမ်းခြေ